Shirkada baabuurta Linnebilar oo Soomaalida siinaysa deyn ribo la’aan ah | Somaliska
Soomaali badan oo doonaysa in ay deyn ku iibsadaan baabuurta ayaa dhibaato ka haysataa dhinaca ribada oo ka hor-istaagaysa in ay iibsadaan baabuurka ay jecelyihiin. Arintaan ayaa hadda waxaa xal u helay shirkada Linnebilar ee ka dhisan magaalada Växjö taasoo macaamiisha Soomaalida diyaar ula ah baabuur casri ah oo ay ku qaadan karaan deyn ilaa 50.000 kr iyaga oo aan wax ribo ah bixin.
Shirkada Linnebilar waxaad ka helaysaa dhamaan nuucyada baabuurta oo kala duwan. Waxay kaa iibinaynayaan baabuur cusub ama la soo isticmaalay ama kaa iibsanaynaan baabuurkaaga. Qofkii u baahan shirkadu waxay siinaysaa deyn ribo la’aan ah ilaa 50000 kronor, shuruudna maha inuu qofku shaqo haysto. Shuruudu waa in qofku ugu yaraan 1 sano wadanka sharci ku leeyahay.
Wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa telefoonadaan 0701456678 ama 0701440101 ama 0470543390. Emailka shirkada waa info@linnebilar.se.
Booqo bogga shirkada: www.linnebilar.se ama Blocket ka daawo baabuurta beeca ah: http://www.blocket.se/linnebilar-i-vaxjo
Mowduucaan waxaa suurto galiyay shirkada Linnebilar.
Adeey Kuu taal says:
Arintani ma aha mid cusub oo horey beey u jirtey oo magaloyin badan ayeey ka jirtey Deynta Ribo Laanta ilaa lacag gareysa 60000 kr. Fiiro Gaar ah Aniga waxan u arkaa Xayeeysin loo sameynayo shirkadan baaburta Linnebilar
Dood kulul. Ka Jawaab? 13 10
Waa runtaa ninkaan cidi lacag siiso ayuu xayeeysiiyaa. Xataa hadii lacag la siiyo oo lagu dhoho somalida qoraal ku caay, Jimcaale kama labalabeeynaayo
War dadkani mee waalan yihiin jimcaale ma adinkaa lacag ku siiya qorista ugu yaraan waxuu lacag ka helay adsense ga oo asiga xataa sharcigiisa uu aad u adag yahayiyo visitors ka mana ahan lacag sidaa usii badan hadii uu shirkad xayeesiiyo ma ceyb baa ?? ma wax qaldan baa `? yaase u diiday in uu wax xayeesiiyo? hadaad wax mucaaradesan wado loo maro ayee leedahay ee fawdada halayska daayo mise adinkaa lacag kusiiya hawsha uu haayo waa adinka ula hadlaya sida qof sharci jabiyay kkkkk
ASC waad mahad santahay horta jimcaale lkn shirkadan aad xayeey siiska usamaynayso anigaa babuurka qaatay volvo v 50 waxay ku sheegayan waxba kama jiraan walaalkis waliba daris ayaan la ahay
xidiga sanadka says:
April 27, 2016 at 18:48